एउटै स्तम्भमा मधेसका ६ सहिद! - Gokarna News
एउटै स्तम्भमा मधेसका ६ सहिद!
महोत्तरी – जलेश्वरस्थित जिरोमाइलमा मधेस आन्दोलनका ६ सहिदका प्रतिमासहितको स्तम्भ राखिएको छ । स्तम्भको प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र राजपा अध्यक्षमण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरले अनावरण गरे ।
स्तम्भमा मधेस आन्दोलनका सहिद रोहन चौधरी, गणेश चौधरी, रामविवेक यादव, रामशीलादेवी मण्डल, अमित कापर र वीरेन्द्र बिच्छाको प्रतिमा छ । सबै प्रतिमा र स्तम्भ प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले व्यक्तिगत खर्चमा बनाएका हुन् ।
एउटा प्रतिमा बनाउन ५० हजारका दरले तीन लाख खर्च भएको झाले बताए । प्रतिमा स्थापना गर्न अर्को एक लाखसहित कूल चार लाख खर्च भएको उनको भनाइ छ ।
मुख्य न्यायाधिवक्ता झाका अनुसार ६ सहिदका प्रतिमा सुनसरीका कलाकार हरिओम मेहेता र दीपक मेहेताले बनाएका हुन् । उनीहरूले सुनसरीमै ती प्रतिमा बनाएर महोत्तरी ल्याएका हुन् । प्रतिमा बनाउन साढे तीन महिना लागेको मुख्य न्यायाधिवक्ता झाले बताए ।
जलेश्वर नगरपालिकाका मेयर रामशंकर मिश्रको सहयोगमा प्रतिमासहितको स्तम्भ जिरोमाइलमा राखिएको हो । सो स्थानमा जलेश्वर नगरपालिकाले ०४९ सालमा पार्क बनाएको थियो । पार्कमा ‘प्रजातन्त्र स्मारक’ थियो । सो स्मारक नै ‘सहिद स्तम्भ’ बनाइएको हो । सो पार्कलाई पनि सहिद बाटिका नामकरण गरिएको छ ।
स्तम्भ अनावरण गर्दै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश २ का मधेसी दलको सरकार सहिदको देन भएको बताए । राउतले भने, ‘सहिदहरूको बलिदानीको कुनै मूल्य छैन, मजस्तो साधारण परिवारबाट आएको व्यक्ति कहिल्यै मुख्यमन्त्री वा मन्त्री बनौँला भनेर कल्पनासमेत गरेको थिइनँ, सहिदकै बलिदानीले सम्भव भयो ।’
राजपा अध्यक्षमण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरले मधेसमा अहिले पनि सयौँ मानिसमाथि झुठा मुद्दा लगाइएको आरोप लगाए । मधेस आन्दोलनको छानबिनका लागि गठन भएको लाल आयोगको प्रतिवेदन पनि केन्द्र सरकारले लुकाइरहेको उनको आरोप छ ।
मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले जलेश्वरमा सहिद बाटिका स्थापित गर्न आफू पदमा आउनुअगावैदेखि लागेको बताए । उनले सहिद कुनै धर्म, जात, पार्टी वा कित्ताको नभएको पनि बताए ।
जलेश्वर नगरपालिकाले ०४९ सालमै जिरोमाइलमा पार्क बनाएर प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सहिद भएकाको सम्झनामा सहिद स्मारक राखेको थियो । अहिले सो स्मारक हटाएर मधेस आन्दोलनका सहिदको स्मारक राखिने भएपछि कांग्रेसले विरोध जनायो । पछि सर्वदलीय सहमतिमा सोही स्तम्भको माथिल्लो भागलाई जस्ताको त्यस्तै राखी बीचमा मधेस आन्दोलनका ६ सहिदको प्रतिमा राखिएको हो ।